Meiigoo S8 Giveaway၊ အကောင်းဆုံးအခမဲ့ Samsung Galaxy S8 Plus ကိုယ်ပွား !! | Androidsis
Francisco Ruiz | | ပြိုင်ပွဲ, မိုဘိုင်း
ငါတို့ခရစ်စမတ်နေ့ရက်တွေဘယ်လိုရောက်နေတယ်၊ ​​လူတိုင်းလက်ဆောင်ကောင်းကောင်းရချင်ကြတယ်၊ Meiigoo S8 အတွက်ပေးကမ်းခြင်းငါ့အဘို့, ငါပြီးသားအတွက်ဖော်ပြခဲ့တဲ့အဖြစ် terminal ကို unboxingဒါဟာဖြစ်ပါသည် Samsung Galaxy S8 Plus ရဲ့အကောင်းဆုံးကိုယ်ပွား.
Un Meiigoo S8 အတွက်နိုင်ငံတကာပွဲစဉ်ငါတို့အဘို့အအကျိုးကိုအဖြစ်အသုံးပြုချင်သော Telegram မှာကျွန်တော်တို့ဖန်တီးနေတဲ့ Androidsis အသိုင်းအဝိုင်းတစ် ဦး အသိုင်းအဝိုင်း ကျနော်တို့အဖွဲ့ဝင် 6500 ကျော်လွန်ပြီ ပြီးတော့သင်သိချင်တဲ့တစ်ခုကသင်ချစ်မြတ်နိုးတော့မယ်ဆိုတာကိုသိသောကြောင့်ဖြစ်စေ၊ Androidsis အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် Telegram application နှစ်ခုလုံးဟာအကောင်းဆုံး multlatform instant messaging application အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့်ယခုသင်သိပြီ၊ အကယ်၍ သင် Meiigoo S8 ကိုခရစ္စမတ်ပွဲအတွက်အနိုင်ရချင်တယ်ဆိုရင်စက္ကန့် ၂၀ အတွင်းအမြင့်ဆုံးစက္ကန့် ၂၀ အတွင်းသင်တွေ့ဆုံရမယ့်မဖြစ်မနေလိုအပ်ချက်နှစ်ခုအတွက်သာသင်တောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီ post ကိုဆက်ဖတ်ပါ။
Meiigoo S8 အတွက်မဲနှိုက်ခြင်းတွင်ပါဝင်ရန်အကြောင်းရင်းများ
ရှိ Telegram ကိုသင်၏ Android တွင်တပ်ဆင်ထားသည်။ ကောင်းပြီကြေးနန်း၊ Plus အား Messenger ကို, Mobogram, Morogram သို့မဟုတ်မည်သည့် Telegram client မဆို။
ပိုင်ဆိုင်သည် Telegram မှ GrupoAndroidsis.
စတိုးစာရင်းသွင်းပါ TechnoChollos 2017 သည် Telegram တွင်တရားဝင် Androidsis စတိုးဖြစ်သည် ဘယ်မှာတွေ့မယ် အကောင်းဆုံးနည်းပညာအပေးအယူ Androidsis မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အကန့်အသတ်တွေအကြောင်းတခြားသူတွေကိုအရင်သင်တွေ့လိမ့်မယ်။
အဖွဲ့ထဲဝင်ပြီးနောက် Androidsis အသိုင်းအဝိုင်း၌သတင်းစကားထားခဲ့ပါ။ ထိုကဲ့သို့သောသို့မဟုတ်ရိုးရှင်းသောမင်္ဂလာပါသည်မလုံလောက်ပါ။
ဒီ Meiigoo S8 အတွက်မဲနှိုက်ခြင်းတွင်ပါ ၀ င်ရန်နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်သည်ဒီ post ကိုထုတ်ဝေသည့် နေ့မှစ၍ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်၊စန်တာကလော့စ်အနေဖြင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအနိုင်ရသူကိုရွေးချယ်ပြီးသူသည်ဖြည့်ဆည်းရမည့်မဖြစ်မနေလိုအပ်ချက်နှစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုရန်အချိန်မီဖြစ်သည်။
အနိုင်ရသူသည် Androidsis ထံမှအီးမေးလ်ကိုလက်ခံရရှိပြီးနောက်သူတို့၏ဆုကို ၂၄ နာရီရရှိမည်ဖြစ်သည်။။ ကျွန်ုပ်တို့သည်နိုင်သူဖြစ်နိုင်သည်ဟုပြောပြီးလိုအပ်သောအခြေအနေ ၂ ခုနှင့်ကိုက်ညီမှုရှိ၊ Telegram ရှိ Androidsis အုပ်စုတွင်ပါ ၀ င်ပြီးသင့်အဖွဲ့ထဲသို့သင်ဝင်ရောက်သည့်အခါသတင်းစကားတစ်ခုကျန်ခဲ့သည်, (ဤသူသည်သင်နိုင်သူဖြစ်လျှင်သင့်ကိုနေရာချထားရန်ဖြစ်သည်) နှင့်ဒုတိယအခြေအနေ TechnoChollos 2017 ကိုကမ်းလှမ်းခြင်း၊Telegram ရှိတရားဝင် Androidsis စတိုး
အနိုင်ရသူကိုမဲချခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့်ထုတ်ယူခြင်းတို့ကိုပြုလုပ်ရန်အသုံးပြုသော platform သည်လူကြိုက်များသော Gleam.io platform ဖြစ်သည်။ ဒီ Meiigoo S8 အတွက်မဲချခြင်းများကိုစက္ကန့် ၂၀ ထက်မကပြုလုပ်ရန်အတွက်လက်တွေ့ကျသောခလုတ်ကိုဒီမှာနှိပ်ပါ။
အရေးကြီးချက် - သင်သည် Androidsis အသိုင်းအဝိုင်း၏အသင်းဝင်ဖြစ်သော်လည်း Gleam မှတစ်ဆင့်အဆင့်များကိုလုပ်ဆောင်ရလိမ့်မည်။ သို့မဟုတ်ပါကဤအံ့ဖွယ် Meiigoo S8 အတွက်မဲချခြင်းတွင်ပါ ၀ င်သူအဖြစ်မှတ်ယူနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။.
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Sortep Meiigoo S8
သငျသညျအခြို့သောဖြုန်းသမျှသောသူတို့အားကံကောင်းပါစေ သင်၏မိသားစု၊ သူငယ်ချင်းများနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောခရစ်စမတ်ပါတီများ Meiigoo S8 အတွက်ဒီခရစ္စမတ်ကိုသင်၏အိမ်သို့ပြန်ပို့ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » ပြိုင်ပွဲ » Meiigoo S8 လက်ဆောင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ giveaway !!
ကြေးနန်း? ကောင်းပြီဘာမှမရှိဘူး ...
ဘာမှမရှိပါဘူး၊ သင့်မှာ Telegram ရှိရမယ် ...
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်အသစ်ဖြစ်ပါသည်၊ သင်မည်သို့ကောင်းသနည်းပျော်ရွှင်ဖွယ်အားလပ်ရက်များ၊ ယခုသင်တို့အားလုံးအတွက်ဖြစ်သည်။
Hugo Bustamante T က ဟုသူကပြောသည်
Hugo Bustamante T ကိုပြန်ပြောပါ
Ivan Treviak ဟုသူကပြောသည်
ငါသရေကျဘို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, sign up လုပ်နေပါတယ်
Aquaris X နှင့် X Pro အတွက် Android Oreo beta ပရိုဂရမ်ကို BQ ဖွင့်သည်